Gufgaf|Online प्रेमनाथ’को सकियो सुटिङ,नयाँ नायिकाको डेव्यु
प्रेमनाथ’को सकियो सुटिङ,नयाँ नायिकाको डेव्यु
गफगाफ -चलचित्र ‘प्रेमनाथ’को सुटिङ सम्पन्न भएको छ । चलचित्रका केहि दृष्य गर्न बाँकी भए पनि चलचित्रको करिव ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ । चलचित्रका निर्देशकका अनुसार प्रारम्भिक चरणको सम्पादनको काम पनि सुरु भइसकेको छ । नव नायिका कृति गौतमले डेव्यु गरेको चलचित्र प्रेमनाथको सुटिङ कपिलवस्तु, दाङ, रोल्पा लगायतका ठाउमा गरिएको बुझिएको छ ।
चलचित्र प्रेमनाथ नेपाल सगै भारतमा समेत रिलिज गर्ने तयारी चलचित्र निर्माण टिमले गरेको छ । नेपालमा चलचित्र वितरणको जिम्मा गोपाल कायस्थले लिएका छन् । भारतमा वितरणको जिम्मा भने बर्चस्व इन्फ्राटेक प्रालिका उमेश सिंहले लिएका बुझिएको छ । चलचित्रको रिलिज भने २०७६ को जेठमा गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । चलचित्रको निर्देशन गणेश बेलबासेले गरेका हुन् । ‘उहिले बाजेको पालामा’ पछि बेलबासेले चलचित्र ‘प्रेमनाथ’को निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रका कार्यकारी निर्माता कपिलप्रसाद द्वा हुन् । चलचित्रमा भरत क्षेत्रीको द्वन्द्व रहेको छ भने सन्तोष श्रेष्ठ, भुपु पाण्डे र एसडी योगीले संगीत दिएका छन् । चलचित्रका गीतहरुमा राजेश पायल राई, भुपु पाण्डे, सूची पन्थी र बेनुका राईको स्वर सुन्न सकिन्छ ।
चलचित्रमा कमल गाउँले, निर शाह, कृति गौतम, सुरबिर पण्डित, राज थापा, मियुम जिरेल, शेखरजंग मल्ल, मोनालिसा विष्ट, सम्झना भेटवाल, पूजा रिमाल लगायतको अभिनय रहेको छ भने निर्देशक गणेश बेलबासेले पनि चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् । चलचित्रमा निर्देशक बेलबासे खलनायकको रुपमा प्रस्तुत भएको बुझिएको छ ।
मनोरञ्जनसँग सम्बन्धीत समाचार , सुचना , जानकारी , फोटो , भिडियो वा अन्य प्रकाशन योग्य सामाग्रि र गतिविधी तपाईसँग छन् भने 9801081610 मा हामीलाई भन्दिनुहोस् वा news.gufgaf@gmail.com मा पठाउनुस् । सँगै हिंड्दा दुवैलाई सजिलो । थप रमाईलोको लागि भिडियोको मज्जा लिनुहोस् ।
अँ भनन् बुढि के भन्न लाग्यौ ??
राजेन्द्र घरमा बसिरहेको थियो त्यतिकैमा त्याहाँ उस्को श्रीमति आएर...
रङ्गशाला निर्माण सम्बन्धमा धुर्मुस सुन्तलीको अपिल : जस्ताको त्यस्तै
गफगाफ - सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले ‘गौतम बु�
जहाँ सौगात त्यहि सृष्टि ?
गफगाफ - अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठ प्
‘हिरो नं वान’ छायांकनमा
गफगाफ - कलाकार तथा निर्देशक जय किशन बस्नेतले निर्माण गर�
अलि बुझ्न गाह्रो भयो नेपालीमा भन्न मिल्दैन..??
धनियाँ अङ्ग्रेजी सिक्न भनि गाईछिन त्यतिकैमा एकदिन
फलफुल पसलको साहुजी
For See Network pvt. Ltd.
Naya Baneshwor Kathmandu
सुचना बिभाग दर्ता नं
प्रकाशक/ सम्पादक : शिखा शर्मा
प्रमुख कार्यकारी : अमित चन्द्र अधिकारी
समाचार संयोजक : राधिका कँडेल
मनोरन्जन उद्योग हाम्रो घर हो । हाम्रो मुल मन्त्र खुशी हो । हामी सधैं सुख र खुशि खोज्छौं । सिर्जनशिल छौं । सपना देख्छौं र मेहेनेत गछौं । हामी कसैप्रति पनि बाङ्गो छैनौं । टेडो सोच्दैनौ । कसैलाई पोल्दैनौं । बिझाउँदैनौं । काममा जाँगर लगाउँछौं । मनमा जोश जगाउँछौं । पेशामा ईमान्दार छौं । त्यसैले बिक्दैनौं र झुक्दैनौं । खुशीका लागि गफगाफ को ढोका सधैं खुल्ला छ ।
Powered By: Eastern Hawk